अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, भ्रष्ट प्रदेशहरुको सुचीमा २ नम्बर प्रदेश पहिलो, अन्य प्रदेशहरुको अवस्था के छ ? — SuchanaKendra.Com
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, भ्रष्ट प्रदेशहरुको सुचीमा २ नम्बर प्रदेश पहिलो, अन्य प्रदेशहरुको अवस्था के छ ?
बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश नं २ देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ पनि सोही प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको छ । काठमाडौँका विभिन्न मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश नं ३ पनि उच्च स्थानमा रहेको हो । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको सङ्ख्या रहेको छ ।